Taliban ayaa si buuxda ula wareegtay gegida dayuuradaha caalamiga ah ee Kabul ee Hamid Karzai
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Taliban ayaa si buuxda ula wareegtay gegida dayuuradaha caalamiga ah ee Kabul ee Hamid Karzai
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • News • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Taalibaan ayaa wada -xaajoodyo la leh Turkiga iyo Qadar oo ku saabsan maaraynta farsamo ee hawlaha garoonka diyaaradaha.
Daalibaan ayaa la wareegi doonta maamulka garoonka diyaaradaha ee Kabul ka dib markii uu Mareykanka isaga baxay.
Talibanka ayaa doonaya in Turkiga iyo Qatar ay gacan ka geystaan ​​sidii ay u shaqeyn lahaayeen garoonka diyaaradaha ee Kabul.
Ciidamada Mareykanka inay ka baxaan Afghanistan 31 -ka Ogosto.
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay, Daalibaan ayaa si buuxda ula wareegi doonta gegida dayuuradaha caalamiga ah ee Kabul ee Hamid Karzai berri oo Talaado ah, 31ka Ogosto.
Sidii hore u ahayd sidaana horaantii, Taliban ayaa wada xaajoodyo la leh Turkiga iyo Qadar oo la xidhiidha maamulka farsamo ee hawlaha madaarka. Dhinacyadu weli ma heshiin.
Horaantii, Afhayeenka Xafiiska Siyaasadda Daalibaan ee Qadar, Mohammad Suhail Shaheen, ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa xagjirka ahi uu rajo wanaagsan ka qabo ka bixitaanka ciidamada shisheeye ee dhowaan ka socda Kabul. Madaarka Caalamiga ah ee Hamid Karzai.
Ka dib markii Maraykanku ku dhawaaqay in la soo afjaray hawlgalkii 20ka sano ahaa ee Afgaanistaan ​​iyo bilowgii ka bixitaanka ciidammada, Talibanka ayaa qaaday weerar ka dhan ah ciidamada dawladda Afgaanistaan. Bishii Ogosto 15 -keedii, dagaalyahannada Daalibaan ayaa gudaha u galay Kabul iyaga oo aan la kulmin wax iska caabin ah, iyagoo si buuxda gacanta ugu dhigay caasimadda Afghanistan saacado yar gudahood.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa dalka ka baxay, halka madaxweyne ku xigeenka Amrullah Saleh uu ku dhawaaqay inuu yahay ku simaha madaxa dowladda wuxuuna ku baaqay in iska caabin hubaysan lala galo Taliban. Dalal badan ayaa sameeyay daadgureyn deg deg ah oo ay ku sameynayaan muwaadiniintooda iyo shaqaalaha safaaradda Afghanistan kadib markii Taliban ay la wareegtay.